Home Wararka RW Rooble ma Dhibbanaa misa waa Dhagarqabe Farmaajeysan?
Iyadoo lagu sii dhawaanayo maalmihii ugu muhiimsanaa taariikhda dalka oo ah 10 ka Oktowber 2021 iyo maalmaha kale ee doorashada ayaa haddana waxaa soo muuqda tallaabooyin dhalin kara guuldarrada hawlaha doorashada iyo fashil ka ilaalinteeda oo ah masuuliyad uu dusha u ritay RW Rooble.
Safarkii Gedo oo Guuldarreystay.
Markii uu Gedo tagay RW Rooble waxaa laga filayey inuu seefta gasha kala baxo oo uu saxo dhammaan khaldaadka ay Kullane Jiis iyo Farmajo halkaas ka sameyeen sida afduubka, Xarigga iyo cagajugleynta aan naxariista lahayn ee gobolka ku baahday oo go’aan cad cad uu ka qaato iyo inuu isu keeno saamileyda ku muransan hawlaha doorashada ee jubaland oo xal halkaas uga sootago ma dhicin mana soo dhowa.
Waxaa jira cuqaal iyo odayaal ka soo jeeda degaanka, gaar ahaan degmada Garbahaarrey oo u xeran Farmajo iyo Kulane Jiis, hasa yeeshee uusan RW Rooble soo deyn, soona hadal qaadin, kuwa kalana uusan la kulmin kadib markii uu Farmajo u sheegay inuu uga dambeeyo Kulane Jiis arrinta Gedo oo dhan, taas oo ah ujeedada Farmajo oo lagu fashilinayo doorasho la isla ogol yahay oo Jubaland ka dhacda.
Haddaba RW Rooble waxaa uu Gedo kala soo noqdo guuldarro ka dhalatay dabinno ay u dhigeen Fahad, Farmajo iyo Kulane jiis oo isku ujeedo ah, danibadaas oo uu awoodi waayey inuu iska ilaaliyo, kana tallaabsado. Reer Gado waxaa uu uga soo tagay meel ka sii xun meeshii uu ugu tagay, isagoo dhowraya rabitaanka Farmajo oo ah dummin iyo dabbinno.
Kulankii Xildibaanada G/Waqooyi
Dhinaca kale, kulan ayaa waxaa loo qabtay mas’uuliyiinta, gaar ahaan Xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Waqooyi oo uu ka maqnaa mas’uulka ugu sarreeya, ugu mudan Sanetor Cabdi Xaashi, Gud. Aqalka Sare, kaas oo lagu guriga RW Rooble. Kulanka oo uu soo qaban qaabiyey wakiilka Abiy ee Somaliya Mahdi Yatakabaruu ayaa ku dhammaaday guul ay gaareen kooxda dabinleyda ah ee Farmajo, Fahad iyo Mahdi Yatakabaruu.
Ujeedada kulanka ayaa ahayd in si dedban Rooble looga ansixiyo guddiga ay Fahad, Farmajo iyo wakiilka Abiy soo dhiseen ee todobada xubnood ah iyadoo ay ka maqan yihiin xubnihii kale ee garabka Guddoomiye Cabdi Xaashi. Guddiyada doorashada ee gobollada waqooyi oo u kala jabay laba ayaa waxaa ay rajadu ahayd in RW Roble uu mideeyo, hasa yeeshee waxaa muuqataba inuusanba fahmin in wax khaldan yihiin, sababtoo ah khudbadiisa waxaa uu ku soo kobay u mahadnaq reer waqooyiga uu uga mahadnaqay markii isagoo sii ansaxsan la geeyey golaha shacbiga. Axnsixinta Rooble Barlamaan diidi karaa halkaas ma joogin, waayo mar hore ayuu dhintay barlamanka.
RW Rooble kama hadlin khilaafka u dhaxeeya reer Waqooyiga, lamana hadlin dadka xalka u saaxiibka ah ee ku jira xildhibaandda labada dhinac ee waqooyiga ka soo jeeda ee waxaa uu u hadlay kooxdii keensatay oo u keensatay inuu ku tufo garabkooda, kuwa kalana uu u caddeeyo dhinaca uu u janjeero si ficil ah walow si hadal ah uu u sheegtay inuu caddaalad falayo doorashana uu ka yahay dhexdhexaad. Haddii ruux wixii oo dhan wada qaatay iyo kii laga qaatay aad tiraahdo hadda ayaan dhexdhexaad idiin noqonayaa oo nin waliba waxa uu haysto ha haysto ma caddaallada Rooblaa tan ilahaay maaha kolley?
RW Maxaa la gaudboonaa Rooble inuu sameeyo?
Inuu arrinta Gedo xal ka keeno oo uusan gobolka iyo Jubaland ka soo tagin ilaa uu dhameeyo khilaafka, Axmed Madoobe ugu yeero Garbahaarrey oo la doodo kadibna ay halkaas ka soo baxaan wax la isku raacsan yahay iyo doorasho wada ogol ah. Laga yaabe RW inuu sidaas jeclaan lahaa laakiin ma yeelan kartideeda ee waxaa uu ku dhacy dabinkii Fashilinta godkiisa koowaad, kaas oo ay u dhigeen Farmajo, Fahad iyo Kullane jiis oo hawl fuliye ah arrintaas.
Arrinka Gobollada waqooyi waxay ahayd RW Rooble inuu mar labaad iyo mar seddexaad kulansiiyo ilaa ay ka heshiiyaan qeybaha isku haya arrimaha doorashada si ay uga madax bannaanaadaan fargelinta Fahad iyo Farmajo. Waayo dadku waa dad damiir leh inkasta oo dano shakhsiyadeed ay kala leeyihiin marka laga daba keeno qofka Muslimka ah waa is dhiibayaa, xataa hadduu wakiil u yahay dano shisheeye sida Mahdi oo Kale.
Isku soo duub RW Rooble waa dhibane, laakiin u baahan inuu fahamsan yahay inuu dhibane u yahay dhibaata-abuurka Farmajo iyo Fahad oo aan marnaba ogolaan Karin inay dalkaan doorasho la isla ogol yahay ka dhacdo ayuuna u dhibban yahay.
Waayo labadaan oday waxay aad iyo aad uga cabsanayaan in lagu qado dembiyadii ay galeen 4tii sano ee tagtay oo ciiddaas ka badan, waana waxa dhaliya kalitaliyaha, kaas oo dambiyada uu galo dartood ku go’aansada inuu kursiga ku dhinto intii la maxkamadeyn lahaa.
Hadda Fahad iyo Farmajo waxay Xamar ka bilaabeen dilal qorsheysan oo waxaa hadda la laynayaa dhammaan dhallinyadii lagu shaqeystay ee NISA ka tirsanaa ee dembiyada lagu galay si aysan u hadlin, waxaana ugu dambeysay gabadha hadda maqan ee Ikran Tahliil oo la leeyahay waxaa loo jarjaray sidii Jamal Khashoqjii. Arrintaan Xamar hadda waxay ka aburtay Cabsi waxaana lagula talinayaa dhammaan dhallinyarada iyo ciddii wax og inay sheegto inta aan la khaarijinin si caddaalada loo horkeeno ciddii gashay dambigaas, xataa haddii adiga lagaa takhaluso.
Rooble ma dhagarqabe qaranka u been guuraya oo u ololeynaya Faramajo miyaa, misa waa dhibane hawl adag faraha la galay? Waqtiga ayaa sheegi doona.